एक बीकन संस्कृति, व्यवसाय र पाक प्रसन्नता
क्यानाडाली मनिटबामा र उत्तरी अमेरिकाको मध्यपश्चिमका प्रेमीहरूमाथि उत्तरी नाकोटा र मिनेसोटा मेन्डरहरू बीचको सीमा, क्षितिजसम्मको लामो विचारको रूपमा आँखा देख्न सकिन्छ।
कस्मोपोलियन सिटी अफ द प्लेन्स
मनिटोबा, विनिपेगको राजधानी प्रायः निश्चित मैदानको शहर हो, तर यसले अनुवादको लागि अनुवाद गर्दैन "बोरिंग।" क्यानाडाको 2011 जनगणना अनुसार लगभग 664,000 को यो शहर एक थोरै कलात्मक दृश्य रहेको छ, जसलाई थियेटर स्थलहरु र छनौट गर्न प्रत्यक्ष संगीत घटनाहरु को साथ।
त्यसपछि त्यहाँ फोक्सहरू, एक सार्वजनिक ठाउँ जहाँ अश्निबोइन र रेड नदियाँहरू बजार, पाक कला र मनोरञ्जन स्थलहरूसँग भेट्छन्। विन्निपेग शहरको एक शहर हो जुन 20 औं शताब्दीको वास्तुकला शुरु भएको हिप एक्सचेन्ज डिस्ट्रिक्ट, फ्रान्स-इफेक्ट सेन्टिफेस र ओस्बेर्ज गाँउ र करिडन एवेन्यूका बोहेमियन सहरको साथमा। मनिटोबा विधान निर्माण भवन अश्इनबोइन नदी नजिकैको शहरी केन्द्रमा छ।
विनिपेग क्यानाडा र उत्तर अमेरिका को भौगोलिक केन्द्र नजिकै छ र एक परिवहन केन्द्र हो जुन व्यापक रेल र वायु लिंकहरु संग छ। यो 1870 मा मनिटोबा को राजधानी बन्यो। यो एक बहुस्कृतिक शहर हो जहाँ 100 भन्दा बढी भाषाहरु बोलिन्छ। र यो विविधता स्वादिष्ट आयाम को यसको जीवंत रेस्टुरेन्ट दृश्य मा जोड्छ।
एक्सचेंज जिल्लामा कला दीर्घाओंका माध्यमबाट चम्किरहेको थियो फोक्समा रहन रमाइलो छ र पुरानो आर्किटेक्चरमा घिमिरे लंच गर्ने वा ओबोबोर्न गाँउ वा कियोरोडोन एवेन्यूमा केही गम्भीर बोहो किनमेल गर्दै छन्।
मनिटोबा विधानसिर्जना भवनले एक रोचक भ्रमणको लागि बनाउँछ र यदि विधानसभा सत्रमा छ भने तपाइँ कानुन बनाइएका हेर्न सक्नुहुन्छ। एसिनाबोइन पार्कमा 1,100 एकड पार्क र बगैंचा समावेश गर्दछ र एक बालिकाको खेलकुद मैदान हो, विलो रूख सुरंगहरू र विशाल पक्षीको घामहरूसँग पूरा हुन्छ; एक चिडियाघर रूढ़िवादी, भाप रेल; र रेस्टुरेन्टहरू।
मनिटोबा संग्रहालय प्राकृतिक हिसाबहरु को हिसाब देखि डायामामा को लागि जानिन्छ र 20 औं शताब्दी को शुरुआती हिस्से को विनिपेग स्टाइलस्केप जब विनिपेग युवा थिए।
विनिमय जिल्लामा कला दीर्घाओंका अलावा, कला प्रेमीहरूको लागि विनिपेग कला ग्यालरी छ। यो संग्रहालय, 1912 मा स्थापित भएको छ, क्यानाडा आर्टको एक ठूलो संग्रह र संसारमा इन्इन आर्टको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संग्रह छ जुन 10,000 भन्दा बढी काम गर्दछ।
मौसम विन्निपेग मा
विन्निपेगको मौसममा आइपुगेको राम्रो प्रतिष्ठा छ। यो पुरा तरिकाले बेपत्ता छैन। यसको उत्तरी महाद्वीप स्थान भनेको यसको छोटो छोटो छ, तर उनीहरु कती राम्रो हुन्छन्। जुलाईमा औसत उच्च79 डिग्री फारेनहाइट 26 सेल्सियस हुन्छ), 50 सेकेण्डको बीचमा (13 सेल्सियस) मा लोभका साथ। अक्टोबरसम्म औसत उच्च 51 डिग्री (10.5 सेल्सियस) छ, त्यसैले विनिपेगका निवासीहरू उनीहरूले गर्दा राम्रो मौसम बनाउन सक्छन्। जनवरीमा औसत उच्च 12 डिग्री (-11 सेल्सियस) हो, हड्डी-कमिंग कम -7 (-21 सेल्सियस) को साथ। तर प्लसको छेउमा, विनिपेगको कुनै क्यानाडा शहरको जाडोको धूपको सबैभन्दा दिन छ र यसलाई अपेक्षाकृत सुकेको छ।
क्यानाडा विश्वयुद्ध द्वितीय पोस्टर ग्यालरी
क्यानाडा रोजगार रोजगार बीमा अनुप्रयोग
रानीको सल्लाह के हो (QC)?
डीजल इन्जिन र ग्याँस इन्जिन
एडान: इस्लामिक कल प्रार्थना गर्न
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति धेरै आप्रवासीहरू अवैध छन्?
समाधानका साथ परिवर्तन वर्कशीटको दर
सकारात्मक सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै
गोल्फ कोर्सको विभिन्न प्रकार
"द ग्लास मेनगेरी" क्यारेक्टर / प्लट सारांश
Ittekimasu - सरल जापानी वाक्यांशहरू
युद्धमा बौद्ध दृश्यहरू
लैटिन अमेरिकाको इतिहासमा 10 भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू
ओक्लाहोमा बिप्टिस्ट विश्वविद्यालय प्रवेश
चीटहरू र अन्य कीराहरू किन बलियो छन्?
एक अर्का familiares puede pedir लास papeles un ciudadano americano
जोश टर्नर जीवनी र डिस्प्ले
1930 को धूल बोटल सूखे
रोमका प्रारम्भिक राजाहरू को थिए?
द्वितीय विश्वयुद्ध: मार्शल जर्जी झाकोव
रोमनेसिक आर्किटेक्चर र आर्ट - यो के हो?
वाशिंगटन विश्वविद्यालय मा बोटहेल प्रवेश
मांसपेशिहरु को निर्माण को लागि शीर्ष शरीर सौष्ठव शरीर को वजन